Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Rhino fizahan-tany nampidirina tao Tanzania Mkomazi Park
Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny Valan-javaboary Mkomazi any avaratr'i Tanzania dia voamarika ho an'ny fizahan-tany Rhino, mikendry ireo mpizahatany liana hijery ny rhino mainty afrika sisa tavela, izay karazana biby dia tandindomin-doza indrindra eto an-tany.
Ny Minisitry ny Harena voajanahary sy ny fizahantany ao Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, dia nandefa ny fizahan-tany Rhino tao amin'ny valan-javaboary Mkomazi ny Alarobia tamin'ity herinandro ity.
Manantena ny hikendry sy hisarika ireo mpizahatany liana amin'ny handeha sary rhino safaris ny Minisitera.
Nilaza ny minisitra fa ny fampidirana ny fizahan-tany Rhino dia ampahany amin'ny drafitry ny governemanta Tanzania.
Ny tanjon'ny governemanta dia ny hisarika mpizahatany 5 tapitrisa izay hampiakatra ny tombam-bidin'ny fizahan-tany hatramin'ny $ 2.6 miliara ka hatramin'ny 6 miliara $ amin'ny taona 2025.
Miorina ao amin'ny faritra avaratry ny fizahantany Tanzania any akaikin'ny Tendrombohitra Kilimanjaro, ny Valan-javaboary Mkomazi dia napetraka ho Toerana Fiarovana Rhino izay azon'ny mpizahatany manerana izao tontolo izao mijery ilay rhino mainty tsy fahita firy voaro ao anaty vala.
Mkomazi dia eo ambany fitantanan'i Valan-javaboary Tanzania (Tanapa). Any amin'ny 112 km atsinanan'ny tanànan'ny Moshi any amin'ny faritr'i Kilimanjaro no misy azy, eo anelanelan'ny boriborin'i safari avaratra sy atsimo.
Ny fizahan-tany Rhino dia azo ampifangaroina mora foana amin'ny fitsangatsanganana any amin'ireo tendrombohitra Usambara na any amin'ny manodidina an'i Pare ary andro vitsivitsy miala sasatra eny amoron'ny Ranomasimbe Indianina Zanzibar.
Ny fiarovana ny Rhino dia tanjona kendrena tadiavin'ireo mpiaro ny tontolo iainana mba hiantohana ny fahavelomany any Afrika taorian'ny fanjonoana poizina izay nanimba ny isany tao anatin'ny folo taona lasa.
Badia mainty dia isan'ireo biby be mpandroba sy tandindomin-doza indrindra any Afrika Atsinanana miaraka amin'ny fihenan'ny isam-poniny amin'ny taha mampatahotra.
Rehefa jerena ny Tendrombohitra Kilimanjaro any avaratra sy ny Valan-javaboary Tsavo Andrefana any Kenya any atsinanana, ny valan-javaboary Mkomazi no valan-javaboary voalohany indrindra atsy Afrika Atsinanana manokana natao ho an'ny fizahan-tany rhino.